အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...:ံHow To Use "Show Current Music Track" at Gtalk with Winamp 5.5
ံHow To Use "Show Current Music Track" at Gtalk with Winamp 5.5
ကျွန်တော် အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် Post အသစ် မတင်ဖြစ်တာ တော်တော်လေးကို ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့တော့ Post လေးတစ်ခုတင်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အရင်ကလို Essay တွေ ကဗျာတွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းပညာ (စကားလုံးနဲနဲ ကြီးသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ) နဲ့ဆိုင်တဲ့ Post လေးတစ်ခုပါ။
အခုကျွန်တော် တင်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းကတော့ Winamp 5.5 အကြောင်းပါ။ ကျွန်တော့် အမြင်အရ Winamp ဟာတစ်ခြားသော Software တွေထက် အသံ Quality ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခုကျွန်တော် ပြောချင်တာက Winamp ကိုကြေငြာပေးဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ Winamp Fans တွေအတွက် သတင်းကောင်းလေး တစ်ခုပါ။
အရင် Version တွေတုန်းက Winamp ကို Gtalk မှာ "Show Current Music Track" လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဘာပြ သနာမှ မရှိပေမယ့် Winamp 5.5 မှာတော့ ပြသနာရှိပါတယ်။ Gtalk မှာ Winamp 5.5 နဲ့ "Show Current Music Track" လုပ်လိုက်တာနဲ့ Gtalk က Not Responding ဖြစ်တော့တာပါဘဲ။ အဲဒီ့ပြသနာကို ဘယ်လိုဖြေ ရှင်းရ မယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်အခုတင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် တော်လွန်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီ့ပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့ Website တွေမှာ လိုက်ရှာ ဖတ်ရင်း Article တစ်ခုကို ဖတ်မိရာမှ ကျွန်တော့်လိုဘဲ Winamp 5.5 နဲ့ Gtalk မှာ "Show Current Music Track" လုပ်မရလို့ ရွာလည်နေတဲ့ Winamp Fans တွေ အတွက်ဖော်ပြပေးလိုက် ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Step5: Close Winamp and Google Talk and Open them again. Then, You Are Rock!!!!
p.s- For More Information & Original Article, Please Click Here or contact to me.
Posted by Pyiet Oo Aung at 5:06 AM
ံHow To Use "Show Current Music Track" at Gtalk wi...